George RR Martin | Akwụkwọ ugbu a
Ka ọ dị ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla hụrụ usoro egwuregwu nke ocheeze maara aha George RR Martin na mmekọrịta o nwere na usoro ahụ. Mana ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime mmadụ ole na ole na -amaghị, ọ bụ ya bụ onye dere usoro akwụkwọ akụkọ A Song of Ice and Fire, nke gụnyere akụkọ ihe mere eme nke usoro telivishọn a ma ama.
Mana kedu ihe ị maara gbasara GRRM, dịka ụfọdụ ndị egwu ha na -akpọ ya? Ọmụmụ ihe? Onyinye ole ka ọ nwere? Kedu akwụkwọ ndị ị dere? Chọpụta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara onye edemede a.
1 Ọnye na -bụ George RR Martin?
1.1 Ihe George RR Martin mụrụ
1.2 Ndụ nke onwe ya
1.3 Awards ị nwetara
2 Ihe GRRM dere
Ọnye na -bụ George RR Martin?
George Raymond Richard Martin, nke a maara nke ọma dị ka George RR Martin ma ọ bụ GRRM, bụ otu n'ime akụkọ sayensị sayensị ama ama ama ama America, ndị na -eche echiche efu na ndị na -ede ihe onyonyo. O bilitere wee bụrụ onye ama ama karịsịa maka usoro A Song of Ice and Fire, nke emegharịrị ka ọ bụrụ usoro telivishọn dịka akwụkwọ mbụ n'usoro, Game of Thrones. Agbanyeghị, tupu usoro ahụ, o nwere ihe ịga nke ọma ndị ọzọ.
George RR Martin amụrụ ma zụlite n'ezinụlọ na -arụ ọrụ. Ọ bụ nwa mbụ nke stevedore Italiantali-German na nwunye ụlọ Irish. O nwere ụmụnne nwoke abụọ ọzọ.
Ebe ọ bụ na ọ dị obere, ọ nwere mmasị n'ịgụ ihe ma na -agụkarị akwụkwọ yana malite ide akụkọ site na nwata.
Ihe George RR Martin mụrụ
Ebe ọ bụ na ọ dị obere ọ maara ihe ọ chọrọ n'ọdịnihu, yabụ mgbe ọ bụ afọ kwesịrị ekwesị ọ debara aha ya na Mahadum Northwwest dị na Evanston, Illinois, ebe ọ mụrụ akwụkwọ akụkọ wee gụchaa na 1971.
Ozugbo o mechara, e mere ya onye jụrụ akọ na uche ya wee nye ya ọrụ ka ọ gbaa asọmpi chess yana ịbụ prọfesọ akwụkwọ akụkọ na Clarke Institute na Dubuque, Iowa.
Ọ jikọtara ọrụ ya na ide ihe, ebe ọ bụ na n'oge ahụ ọ malitere ịrụsi ọrụ ike na akụkụ edemede wee dee ọtụtụ akwụkwọ akụkọ dị mkpirikpi, ụfọdụ n'ime ha nyere onyinye, ọkachasị na onyinye Hugo na Nebula.
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ mbụ mepere ya ọtụtụ ụzọ bụ Ọnwụ nke Ìhè ahụ, nke edere na 1977, si otu a na -emezu na ọ nwere ike ịrara onwe ya nye ide ihe, na -agwakọta akụkọ sayensị, egwu na echiche efu.
Na mgbakwunye na ide, ọ malitere inwe mmasị na ọrụ ya na Hollywood dị ka onye na -enyocha ihu, na -esonye n'ọtụtụ usoro telivishọn dị ka Mma na anụ ọhịa, Mpaghara Twilight, akụkọ ifo nke akụkọ ntolite ụwa ...
Ọ naghị adịte aka, ebe ọ bụ na na 1996 o kpebiri ịhapụ Hollywood wee lekwasị anya n'ọrụ edemede ya na Santa Fe, New Mexico, ebe ọ malitere ide usoro akwụkwọ akụkọ A Song of Ice and Fire, malite na Game of Thrones.
Ndụ nke onwe ya
Ọ na -ekerịta ndụ ya na Gale Burnick, a alụmdi na nwunye nke were naanị afọ anọ. Agbanyeghị, nke a akwụsịghị njem ya, ha mechara kewapụ na 1979.
Agbanyeghị, ịhụnanya kụrụ aka n'ọnụ ụzọ ya ọzọ na 2011 onye ya na ya lụrụ Parris McBride.
Tupu ndị nwunye abụọ a, o nwere onye mmekọ, Lisa Tuttle, onye ya na ya nọ na 70s.
O nwere sinima Jean Cocteau na Santa Fe, yana ụlọ kọfị, na-eweghachi ma na-eme ka ọ dị ọhụrụ, ọkachasị nke ikpeazụ, nke mere ya ka ọ bụrụ ebe ngosi nka.
Awards ị nwetara
Na mgbakwunye na ịba ụba ma a bịa n'akụkọ edere ede, George RR Martin nwere ike nwee nganga na ọ bụ onye edemede onye Ha enyela ya ọtụtụ ihe nrite kemgbe ọ malitere ọrụ ide akwụkwọ na 1971. Ụfọdụ n'ime ọtụtụ ihe nrite o nwetara bụ:
Onyinye Hugo maka akwụkwọ akụkọ kacha dị mkpirikpi na akụkọ kacha mma (Abụ maka Lya, Sandkings, Ụzọ Cross na Dragọn).
Onyinye Locus maka akwụkwọ akụkọ kacha dị mkpirikpi, nchịkọta, akụkọ na obere akụkọ (Oké ifufe nke Windhaven, Sandkings, Way of Cross and Dragon), Nightflyers).
Mmeri nke Nébula maka akụkọ kacha mma (Sandkings, Portrait of His Children.
AnLab maka akwụkwọ akụkọ kacha dị mkpirikpi, usoro ...
Ignotus Award maka Akwụkwọ akụkọ mba ofesi kacha mma (Egwuregwu ocheeze, nsogbu nke ndị eze, oke ifufe).
Kemgbe afọ 2012 ọ nwetabeghị ihe nrite ọ bụla ọzọ, ọ bụkwa maka na o deghị ihe nwa oge.
Ihe GRRM dere
Mgbe ọ dị afọ 73, George RR Martin bụ onye edemede na -enweghị ike ịsị na o deghị akwụkwọ. N'ezie, o nwere ọtụtụ, n'etiti akwụkwọ akụkọ nnwere onwe, usoro, akwụkwọ akụkọ na akụkọ ifo.
Ọ bụ eziokwu na ọrụ butere ya ịbụ onye a ma ama, nke a ka na -ekwukwa ọtụtụ oge taa, bụ nke usoro Abụ nke ice na ọkụ, emegharịrị na usoro onyonyo dị ka Game of Thrones, aha akwụkwọ mbụ nke mepere saga.
Na mgbakwunye na akwụkwọ a, anyị nwere:
Nsogbu nke Ndị Eze.
Oriri Maka Igwe.
Ịgba egwu nke dragons.
Nrọ oge opupu ihe ubi.
N'ezie, buru n'uche nke ahụ edebeghị nke abụọ ikpeazụ na na, na mgbakwunye, onye ode akwụkwọ adọla aka na ntị na njedebe nke usoro a agaghị adị, tere aka ya, dịka Egwuregwu Ocheeze kwụsịrị n'oge ya, nke nwere ike bulie ọtụtụ mgbanwe na ihe omume ndị akọgoro ruo taa. (Ọ bụ nsogbu nke usoro ahụ ruru onye dere ya na nke a na -ewe oge igbochi).
N'ihe banyere usoro egwu nke abụ na ice, enwere akwụkwọ akụkọ dị mkpirikpi metụtara usoro ahụ, ma ọ bụ ọbụna akwụkwọ ibe. Kpọtụrụ:
Onye isi na -awagharị awagharị.
Mma agha na -eguzosi ike n'ihe.
Ihe omimi Knight.
Adaeze na eze nwanyị.
Onye isi ọjọọ
Ụwa ice na ọkụ.
Ụmụ dragọn ahụ
Ọkụ na ọbara. Nke a ga -abụ prequel na -ewere ọnọdụ afọ 300 tupu Egwuregwu Ocheeze, ebe a na -akọ akụkọ ụlọ Targaryens.
Mezue ndepụta akwụkwọ site n'aka George RR Martin the anthologies nke o sonyere na ya (GRRM. A RRetrospective), akwụkwọ akụkọ dị mkpirikpi na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ nnwere onwe, dị ka Abụ maka Lya, Nrọ Fevre ma ọ bụ Dragọn Ice.
Ị gụọla akwụkwọ George RR Martin ọ bụla? Kedu ihe ị chere? Ị nwere mmasị ịmata akụkọ ndụ onye ode akwụkwọ nke ị nwere ike ịgwa anyị? Ka anyị mara!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » George RR Martin